URosa Ribas. Udliwanondlebe nombhali waBantwana abaLungileyo | Uncwadi lwangoku
URosa Ribas. Udliwanondlebe nombhali waBantwana abaLungileyo
Ifoto nguRosa Ribas. Iprofayile ye-Twitter.
URosa Ribas ngumdali we UCornelia Weber-Tejedor en Phakathi kwamanzi amabini, la Ngeminyaka yee-50s trilogy (Sele zinezandla ezine nombhali uSabine Hoffman) eqanjwe ngu Isipho seelwimi, Ingqele enkulu ebandayo kunye neBlue Blue, wonke umsiko omnyama. Kodwa tyikitya Umhlalaphantsi uLeonardo, uMcuphi oBonayo, uMama oMashumi amahlanu o Inyanga emigodini. Kwaye ngoku une UHernandez, usapho lwabacuphi abenza inkwenkwezi Into eqheleke kakhulu y Oonyana abalungileyo, ephume kulo nyaka.
Ndiyabulela kakhulu Olu dliwanondlebe olizinikele kum, ububele bakho kunye nengqalelo. Kuyo usixelela kancinci ngayo yonke into, ukusuka kweyokuqala iimpembelelo, Ukuya ngapha kwabo ababhali ozithandayo kunye ezintsha iiprojekthi ucwangcisile, kunye nokujonga imeko-bume jikelele yokupapasha.
ROSA RIBAS: Andikhumbuli incwadi yokuqala ngokuqinisekileyo. Izembozo ezimbini ziza engqondweni: Icorsair emnyama nguEmilio Salgari, incwadi endisayigcinayo ndiyigcine njengobuncwane. Andazi ukuba ndiyifunde kangaphi le ncwadi. Kwaye enye Enid Blyton, Bonke abahlanu basengxakini, Ndicinga ukuba ibiyiyo.
Ibali lokuqala endilikhumbulayo kufuneka ukuba ndalibhala xa ndandimalunga neminyaka elishumi ubudala. Yayinye Ibali elibuhlungu nelimangalisayo malunga nenkunzi yenkomo eyayingafuni ukufa kwiplaza. Ndiyakhumbula ukuba ndiyibhalele eklasini (utitshala ebendenza ndibhale ukuze ndithule okwethutyana) emva koko kufuneka ndiyifunde phambi kweklasi yonke. Into elungileyo yayikukubona ukuba inkwenkwe endiyithandayo (Molo, Quique!) Ndisule ngokufihlakeleyo inyembezi ekupheleni kokufunda.
RR: Ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo, incwadi yamabali ngu Poe, ekunokwenzeka ukuba ndiyifunde kwangoko kakhulu kwaye yandibangela inkwantyisa ebusuku.
RR: UJohn irving. Omnye wababhali endibathandayo. Andizithandi iinoveli ezinde kakhulu, kodwa ngo-Irving ndingaya kwiphepha elinamakhulu amabini okanye amabini angaphezulu.
RR: Ndingathanda ukudibana nesibindi ijoni uSchwejk, nguJaroslav Hasek kwaye ndineebhiya ezimbalwa kunye naye. Kwaye wenze, uRipley, ukusuka Highsmith.
RR: ndibhala ngesandla nepensile. Emva koko ndiyigqithisela kwikhompyuter
RR: Ngaphambi kobhubhane, ndaqala ukubhala kwi-cafe. Ngoku ndifunde ukuqala ukusebenza idesika yam.
RR: Andinakukhetha. Ndim i mhle umfundi onesiphithiphithi kwaye ivulekele kuzo zonke iintlobo zokufundwa.
RR: Ndihlala ndinayo Iincwadi ezininzi ngaxeshanye. Ndiyafunda Umlobi wamanqindi wasePoland NguEduardo Halfon, Yeba ubominguLouise Penny kunye I-Aberteurliche Reise durch mein ZimmernguKarl-Markus Gauß. En le mizuzu Ndijonga inoveli emfutshane. Kodwa ngaphezulu andinakubala.
RR: Kunzima, nangona mhlawumbi kungenjalo ukuba kukho ababhali abaninzi, kodwa abantu abaninzi abenza esidlangalaleni umdla wabo kupapasho. Yeyiphi, kwelinye icala, ehambelana nenyani yokuba kukho ezinye iindlela zokupapasha.
RR: Ewe, ngenxa yomsebenzi wam, ndiqhele ukuhlala ndedwa, ukuchitha iiyure ezininzi kwigumbi lokusebenza. Kodwa bekusoloko kukuvalelwa ngokuzithandela. Ngoku, emva kweenyanga ezininzi ubhubhane, Ndiyabona ukudinwa esabelana ngako sonke. Ukwazi ukuba ndiza kuyifumana into elungileyo kule nto, andikabi nayo imbono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » URosa Ribas. Udliwanondlebe nombhali waBantwana abaLungileyo
Umhla wokulahleka kwengqondo wawulahlekile